निर्दोष प्रहरीलाई साढे १३ वर्ष जेल ! - Everest Dainik - News from Nepal
निर्दोष प्रहरीलाई साढे १३ वर्ष जेल !
काठमाडौं, भदौ २३ । बलात्कार र हत्याको झूटो आरोपमा पक्राउ परेका एक प्रहरी जवान साढे १३ वर्षपछि निर्दोष प्रमाणित भएका छन् । गोंगबु बसपार्कमा डियुटीमै खटिएका बेला पक्राउ गरिएका प्रहरी जवान मदननारायण श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले निर्दोष ठहर्याएको हो।
याे पनि पढ्नुस पाँच बर्षीया बालिका बलात्कारी पक्राउ
याे पनि पढ्नुस १६ डिआइजी र २२ एसएसपीको बढुवा, को–को परे बढुवामा ? नामसहित
याे पनि पढ्नुस खाग तस्कर १० वर्षपछि पक्राउ
साक्षी सरोज लामाले भनेकै आधारमा गरिएको बकपत्रलाई आधार मान्न नहुने भन्दै सर्वोच्चले अन्य रूपले प्रमाणित नभएसम्म सुनेको कुरा प्रमाणका रूपमा स्विकार्य नहुने व्याख्या गर्‍यो। यो फैसला हुँदा मदननारायण १३ वर्ष ६ महिना ३ दिन जेल बसिसकेका थिए। गत वर्ष फैसला भएको मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले हालै तयार पारेको हो। कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: Nepal police, प्रहरी जवान